किन तर्सन्छन् ओली ? - नेपालबहस
किन तर्सन्छन् ओली ?
| १३:३८:११ मा प्रकाशित
२६ पुष, काठमाडौं । बलिउड सिने जगतका चर्चित हाँस्य कलाकार कादर खानको डायलग नेपाली दर्शकका लागिसमेत बढो चर्चित थियो– “तुम करो त चमत्कार, हम करें तो बलात्कार ?” नेपाली राजनीतिक क्षितिजमा अहिले ठीक त्यही अवस्था निर्माण भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुष ५ गते हठात् प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि एकोहोरो भन्दैछन्–मरेको संसद अब ब्यूँतन सक्दैन । चुनावको विकल्पै छैन । विघटनको विषय विवादित छ, त्यसैले यसको निरुपणका लागि सर्वाेच्च अदालतमा सुनुवाई भइरहेको छ । ओली भन्छन्–अब मरेको प्रतिनिधिसभा ब्यूँताएर के रमिता देखाउने ? ओलीको यो धम्कीपूर्ण भाषण रामशाहपथसम्म पुगेकै हुनुपर्छ । न्यायमूर्तिले ओलीको बोली नसुनेका पक्कै छैनन् । तर कानूनका ज्ञाता र मर्मज्ञहरु भन्छन्–संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार दिएकै छैन ।
त्यही मर्म र भावनालाई बुलन्द गर्न अस्ती मात्रै चारजना पूर्व प्रधानन्यायधीशहरुले संयुक्त वक्तव्य जारी गरे । ओलीलाई त्यो सैह्य भएन । हिजो मात्रै उनले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रमा औंला ठड्याउँदै भने – पोहर परार अदालततिर जागिर खानेहरु आफू रिटायर्ड भएकै विर्सिए छन् , न्यायमूर्तिहरुलाई धम्क्याउँदै यसो गर वा उसो गर पो भन्छन् ।
याे भनेको अदालतलाई गुमराहमा राख्ने मात्र होइन, धम्क्याउने र प्रभावित पार्ने दुष्प्रयास हो । झगडियाले जथाभावी बोल्न मिल्ने तर विधिशास्त्रीय मूल्य मान्यताका ज्ञाताहरुले अदालतलाई प्रकाश देखाउन खोज्न चाहिं गलत भन्नु कुनैपनि दृष्टिले बाञ्छनीय होइन ।
आफ्नो आँगको भैंसी नदेख्नेले अर्काको आँगको जुुम्रा देखाउने प्रवृत्ति भनेकै यही हो । ओलीले आफूले जे भनेपनि हुने अरुले बोल्नै नपाउने प्रवृत्ति देखाएका छन् । यो भनेको निरंकुश शैली र चरित्र हो । कामचलाउ हैसियतमा पुगिसकेका ओलीको शव्दजाल र कुण्ठा सर्वाेच्चका चार जना पूर्व प्रधानन्याधीशतिर फर्किएको छ ।
प्रतिनिधिसभा पुनर्गठनको हकदैया प्रधानमन्त्रीलाई नरहेको उनीहरुको ठहरले ओली र समर्थकका लागि खपिनसक्नु भएको छ । त्यसैले उनीहरु भाषणदेखि सामाजिक सञ्जालमा समेत यो विषयलाई चर्काइरहेका छन् । साँच्चै भन्ने हो भने सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधिन मुद्धाको झगडिया ओली हुन् । उनले चाहिं न्यायलयलाई प्रभावित पार्न खोज्नु नैतिक र कानूनीरुपमा समेत अपराध हो । जबकी तीसौं वर्ष न्याय सम्पादन गर्ने तहमा बसेका न्यायमूर्तिले देखेको बुझेको र अनुभूत गरेको कुरा सार्वजनिक गरेर अदालतलाई उज्यालोतर्फ डोर्याएको भन्न मिल्छ ।
ओली भने मैले गरेको निर्णय अदालतले सदर गर्नैपर्छ, भएरै छाड्छ, सेटिङ मिलाएको छु भन्दै हिंडेका छन् । यो भनेको अदालतलाई गुमराहमा राख्ने मात्र होइन, धम्क्याउने र प्रभावित पार्ने दुष्प्रयास हो । झगडियाले जथाभावी बोल्न मिल्ने तर विधिशास्त्रीय मूल्य मान्यताका ज्ञाताहरुले अदालतलाई प्रकाश देखाउन खोज्न चाहिं गलत भन्नु कुनैपनि दृष्टिले बाञ्छनीय होइन ।
दुनियाँलाई थाहा छ– प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले जालझेल गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका हुन् । तर आफ्नो कुकर्मलाई बलजफ्ती स्थापित गर्न ओली बल गरिरहेका छन् । सम्भवतः उनले भनेजस्तै सेटिङ पनि मिलेको होला , तर पूर्व चार प्रधानन्यायधीशको वक्तव्यले सर्वाेच्च अदालतका न्यायमूर्तिहरुलाई पक्कै प्रभावित पार्ला नै । नत्र सेटिङ मिलेको हैन भने ओली तर्सनुपर्ने कुनै कारण देखिंदैन ।
नयाँ ताजा जनादेशका लागि जनतामा जान निर्वाचनको घोषणा : ओली ८ घण्टा पहिले
प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति अलोकतान्त्रिक भएको ठहर ११ घण्टा पहिले
प्रचण्डले आरोपपत्र फिर्ता लिए पार्टी एकता हुनसक्नेः ईश्वर पोखरेल १३ घण्टा पहिले
आयोगको निर्णयले को-खुशी ? १३ घण्टा पहिले
नेपालको वन विकास क्षेत्रमा इजरायले सघाउने १४ घण्टा पहिले
कोटेश्वर–कलङ्की सडकमा सात स्थानमा बत्ती राखिने १५ घण्टा पहिले
अदालतको आदेश ढिलो भए चुनाव पछाडि सर्ने : गृहमन्त्री थापा १३ घण्टा पहिले
काठमाडाैं उपत्यकामा घाम लागे पनि चिसो हावा चल्ने २० घण्टा पहिले
राष्ट्रपति बाइडेनले शपथग्रहणमा लगाएको घडीको मूल्य आठ लाख १० घण्टा पहिले
आज थप ३३९ जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि ११ घण्टा पहिले
साङ्लामा ऐतिहासिक साङ्ला पोखरी निर्माण ७ दिन पहिले
बजार बढे पनि बिक्रीकर्ता हावी भएको सङ्केत ? कहाँ निर छ सानो प्रतिरोध ? ५ दिन पहिले
बजारले २५०० को यात्रा तय गर्दा के छन् बजारका आजका सकारात्मक पक्षहरु ? ४ दिन पहिले
कावासोतीमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा दुईको मृत्यु ३ दिन पहिले
हाइड्रोपावर कम्पनीले पायो आईपीओ निष्कासनको अनुमति ५ दिन पहिले
अशक्त वन्यजन्तुको संरक्षणका लागि उद्धार केन्द्र स्थापना ३ हप्ता पहिले
चिसो मौसम अर्कोतिर भारी हिमपात, ज्यानको बाजी राखी निकुञ्जको सुरक्षा १ हप्ता पहिले
तस्करी अभियोगमा सात वर्षदेखि फरार अभियुक्त पक्राउ १ हप्ता पहिले
राउटे परिवारलाई कम्बल वितरण ३ हप्ता पहिले
थारू समुदायमा माघीको चहलपहल २ हप्ता पहिले
सुनको मूल्य आज तोलामा कति ? ५ दिन पहिले
महासचिव पौडेललाई फेसबुक भरी व्यङगात्मक शुभकामना २ महिना पहिले
वर्षाका कारण कर्णाली राजमार्गमा सडक अवरुद्ध ६ महिना पहिले
कोरोना भाइरसबाट विश्वमा पाँच लाख ५७ हजार भन्दा बढीको मृत्यु ७ महिना पहिले
सत्तामा उक्लने राष्ट्रवाद ८ महिना पहिले